ကြက်ကုန်းဘောင်ကြီးကြော် | Wutyee Food House
« သိုးသား(သို့) ဆိတ်သား ဒိန်ချဉ် အိန္ဒိယဟင်းလျာ
ပြောင်းဖူး ကော်ရည်ဟင်းချို »
December 26, 2009 by chowutyee
၁။ ကြက်သား (ရင်ဘုံသား) – ၂၀ ကျပ်သား (အနေတော် တုံးပေးပါ)
၂။ ကြက်သွန်နီ – ၂လုံး (လေးစိပ်စိတ်ပါ)
၃။ မုန်လာဥနီ – ၂ခု (အနေတော် တုံးပေးပါ)
၄။ ဘိုစားပဲ – ၁၀ခု (အနေတော် တုံးပေးပါ)
၅။ ပြောင်းဖူးသေး – ၈ခု (အနေတော် တုံးပေးပါ)
၆။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၂ခု ( အရှည်လှီးပေးပါ)
ရ။ သီဟိုစေ့ – ၁၅စေ့
၈။ ငရုတ်ပွနီခြောက် – ၃ခု
၁။ ကြက်သားကို [ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ပဲငံပြာရည်အနောက် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ခရုဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ ဂျုံမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) ] ထည့် နုယ်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်ထဲ ဆီများထည့်ပြီး နုယ်ထားသော ကြက်သားကို ၂မိနစ်ခန့် မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ကြော်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားသော ကြက်သားများကို ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၃။ ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း) ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်ကာ စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှ ဆီပူုထိုးပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥနီ ထည့်မွှေပေးပါ။ ပြောင်းဖူးသေး၊ ဘိုစားပဲ ထည့်ပေးပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ကြက်ပြုတ်ရည်(သို့) ရေ(တခွက်) ထည့်ပြီး အဖုံး ၁မိနစ်ခန့်အုပ်ထားပေးပါ။
၆။ ရေအနည်းငယ်ကျန်လျှင် ကြက်သား၊ ပဲငံပြာရည်အနောက် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ နှမ်းဆီ(၄စက်)၊ ခရုဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ သကြား(လကဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း)၊ ကြက်သွန်မြိတ် ထည့်မွှေပေးပါ။
၇။ ထို့နောက် အရသာအပေါ့အငံမြည်းပြီး သီဟိုစေ့၊ ငရုတ်ပွခြောက် ထည့်ပြီး ရေခန်းသည်အထိမွှေပေးပါ။
၈။ အရသာစူးရှပြီး စားလို့ကောင်းသော ကြက်ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်ကို ထမင်းနှင့်တွဲဖက် စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
– ကြက်ကုန်းဘောင်ကြီးကြော် ကိုဝတ်ရည်ချက်ခဲ့တဲ့ ဟင်းတွေထဲက အကြိုက်ဆုံး တခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ၀တ်ရည်ရေးထားတဲ့ နည်းအတိုင်း ချက်ကြည့်ပါ အရသာ အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်များမှာ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
on January 2, 2010 at 2:58 am | Reply myintkt
This recipe tastes better than the usual one you can get at Chinese restaurant. The emphasize is on the chicken. It taste so smooth and delicious!!!
on January 3, 2010 at 12:25 pm | Reply hmone gyi
yes we can get at chinese restaurant but i believe my twin receipt is better ….i will try it look yummy 😉
on April 20, 2010 at 7:31 am | Reply innocence
After frying chicken for2mins, does it has to be taken out from pan away from heat?
on April 20, 2010 at 9:50 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ပါတယ်.. ၂မိနစ်ခန့် ကြော်ပြီးရင် ပန်းကန်ထဲ ပြန်ဆယ်ထားရမှာပါ.. ရေးထားတာ မပြည့်စုံသွားလို့ပါ။ 🙂
on June 4, 2010 at 4:59 am | Reply mya
i really like your recipes. i have one question though if u don’t mind.
in this recipe, you said to add water or chicken broth 1 cup to the fried veggies. How much do you mean of that cup of water?acoffee cup ( which is about 8 oz).
sorry for not using Myanmar font as i am not used to it. thank you so much.
on June 5, 2010 at 3:51 am | Reply chowutyee
Mya ပြည့်စုံအောင် မရေးမိလို့ ဆောရီးပဲနော်… ရေတစ်ခွက်(သို့) ကြက်ပြုတ်ရည် တစ်ခွက် ဆိုတာ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးနဲ့ တစ်ခွက်ကို ပြောတာပါ.. ဒီကြက်ကုန်းဘောင်ကို လုပ်စားကြည့်ပါ၊ တကယ်ကောင်းလို့ ညွှန်းတာပါနော်..:)
on June 5, 2010 at 5:23 pm | Reply mya
Thanks for your reply Ma Wutyee. i will definitely try !
on April 29, 2012 at 10:28 pm | Reply Hla Myo- New York
I also like this curry very much. You and me are same.
on May 2, 2012 at 11:23 am | Reply chowutyee
Yeah sis, I love it very much too!! 🙂